Mwepụ egbugbu laser na usoro mwepụ ụcha usoro ndị na -emepụta na ndị na -ebubata ya - China Laser tattoo tattoo and pigmentation series series Factory
PicoSecond Laser na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ n'ogologo) wee were nnukwu nrụgide kụọ melanin, melanin na-agbajikwa n'ime obere irighiri uzuzu. N'ihi na irighiri ihe ndị ahụ pere mpe, ahụ na -etinye ha ngwa ngwa ma kpochapụ ha. Ọ bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na-adịghị emerụ ahụ maka akpụkpọ ahụ.
PicoSecond Laser na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ na lenath) wee jiri nnukwu nrụgide kụọ melanin wee hapụ melanin ka ọ gbawaa n'ime obere ntụ dị ka uzuzu. N'ihi na ụmụ irighiri ihe ndị ahụ pere mpe. ha na -amịkọrọ ha ngwa ngwa ma kpochapụ ha. Ọ bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ ngwa ngwa ma dị mfe, na-adịghị emerụ ahụ laser akpụkpọ anụ ahụ.
Picosure Q Switch Nd Yag Laser Pigmentation Removal Machine Maka Iwepụ Afọ
PicoSecond Laser na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ n'ogologo) wee were nnukwu nrụgide kụọ melanin, melanin na-agbawasị n'ime obere irighiri uzuzu. N'ihi na irighiri ihe ndị ahụ pere mpe, ahụ na -etinye ha ngwa ngwa ma kpochapụ ha. Ọ bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe, na-adịghị emerụ ahụ maka akpụkpọ ahụ.
Laser Picosecond na-eji obere mkpụmkpụ mkpụmkpụ (otu puku ijeri nke abụọ na lenath) were nnukwu nrụgide kụọ melanin wee hapụ melanin ka ọ gbawaa n'ime irighiri ihe dị ka uzuzu. N'ihi na ụmụ irighiri ihe ndị ahụ pere mpe. ha na -amịkọrọ ha ngwa ngwa ma kpochapụ ha. Ọ bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ ngwa ngwa ma dị mfe, na-adịghị emerụ ahụ laser akpụkpọ anụ ahụ.